कलेज पढ्ने विद्यार्थीलाई उपचार गराउँदा ९० प्रतिशत छुट - Paschimnepal.com
कलेज पढ्ने विद्यार्थीलाई उपचार गराउँदा ९० प्रतिशत छुट
काठमाडौंको शंकरदेव क्याम्पसमा स्नातकोत्तर अध्ययनरत कल्पना पाठकले स्वास्थ्य बिमा शुल्क तिरेकी छिन् । तर, उनलाई यसबारे चासो छैन ।
कल्पना मात्र होइन, अधिकांश विद्यार्थीलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयले उपलब्ध गराइरहेको स्वास्थ्योपचार बिमा सुविधाबारे जानकारी छैन । जानकारी पाएका विद्यार्थीले बिमा शुल्क रकमको प्रयोगबारे चासो देखाएका छैनन् ।
विगत १६ वर्षदेखि त्रिविले स्वास्थ्य बिमा शुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यसबारे शिक्षक र कर्मचारीलाई जानकारी छ । तर, अधिकांश विद्यार्थीलाई थाहा छैन ।
स्वास्थ्य बिमा शुल्कबारे विद्यार्थीलाई जानकारी नहुँदा त्रिविको विद्यार्थी स्वास्थ्य उपचार कोषमा ५ करोड रुपैयाँ थन्किएकोे छ ।
त्रिविले आफ्ना आंगिक क्याम्पसका शिक्षक, कर्मचारी र विद्यार्थीलाई कल्याणकारी योजनाअनुरूप स्वास्थ्य बिमा सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको हो । त्रिविमा बर्सेनि १ लाख ३० हजार विद्यार्थी अध्ययन गर्छन् । तर, जानकारी नहुँदा अधिकांश विद्यार्थी यो सेवाबाट वञ्चित छन् । ‘१६ वर्ष पुगिसक्दा पनि अधिकांश विद्यार्थीलाई स्वास्थ्य बिमाबारे जानकारी नहुनुमा क्याम्पस प्रशासन र विद्यार्थी दुवैको कमजोरी हो,’ विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयका कार्यकारी निर्देशक गंगाबहादुर मगरले भने ।
त्रिविले विगत दुई वर्षदेखि विद्यार्थी, कर्मचारी र शिक्षकलाई ९० प्रतिशत छुटमा स्वास्थ्योपचार सुविधा दिँदै आएको छ । २०५९ सालमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु गर्दा ५० प्रतिशत मात्र सहुलियत दिने गरेको निर्देशनालयले आव २०७१/०७२ बाट ४० प्रतिशत बढाएर ९० प्रतिशत पु-यायो ।
यसपछि त्रिविले हरेक तहमा विद्यार्थीसँग भर्ना कार्यक्रमै स्वास्थ्य बिमा शुल्कबापत ५ सय रुपैयाँ लिँदै आएको विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालय शाखा अधिकृत सरस्वती गुरुङले बताइन् । विद्यार्थीको १ लाखसम्मको उपचार खर्चमा ९० प्रतिशत निर्देशनालयले बेहोर्छ ।
गुरुङका अनुसार २०७१ पुसदेखि २०७३ असार मसान्तसम्ममा ५३ जनाले मात्र स्वास्थ्य बिमा सुविधा लिएका छन् । निर्देशनालयले सुविधा लिने विद्यार्थीको उपचार खर्चबापत ५५ हजार ७ सय ४२ रुपैयाँ बेहोरेको छ ।
त्रिविको विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो ।
त्रिविका ६२ आंगिक क्याम्पसमध्ये ३७ वटा क्याम्पसले मात्रै स्वास्थ्य बिमा शुल्क लिएका छन् । बाँकी २५ वटा क्याम्पसले यसमा चासो देखाएका छैनन् ।
क्याम्पस प्रशासन मौन
क्याम्पस प्रशासनले भर्ना रसिदमै स्वास्थ्य बिमा उल्लेख भएकाले विद्यार्थीलाई पुनः जानकारी गराउन आवश्यक ठानेन । त्यस्तै, विद्यार्थी संगठनले पनि स्वास्थ्य बिमाबारे विद्यार्थीलाई जानकारी दिन तदारुकता देखाएनन् ।
निर्देशनालयले स्वास्स्थ्य बिमा शुल्क लागू गर्नुपर्ने भन्दै पत्राचार गर्दा समेत क्याम्पसले स्वास्थ्य बिमा शुल्क नलिइएको पाइएको छ ।
शंकरदेव क्याम्पसमा अध्ययनरत दीपा शाही भन्छिन्, ‘क्याम्पसले स्वास्थ्य बिमा शुल्क लिएको छ तर त्यसको प्रक्रिया के हो ? कसरी सुविधा लिने ? केही पनि थाहा छैन । क्याम्पसमा यस विषयमा जानकारी नहुने विद्यार्थी धेरै नै छन् ।’
विद्यार्थीलाई भर्ना हुँदा कुन कुन शीर्षकमा आफूले शुल्क बुझाएको भन्ने समेत वास्ता छैन ।
शंकरदेवका क्याम्पस प्रमुख कृष्णप्रसाद आचार्य भन्छन्, ‘भर्ना गर्दाको रसिदमा स्पष्टसँग स्वास्थ्य बिमाको शीर्षक लेखिएको छ तर विद्यार्थी नै वास्ता गर्दैनन् त । हामीले के गर्ने ?’
त्रिवि र यसअन्तर्गतका आंगिक क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थीले स्वास्थ्योपचार सुविधा पाउँछन् । तर, पढाइ छोडिसकेको अवस्थामा सुविधा लिन पाइनेछैन । त्यस्तै, शिक्षक र कर्मचारीको हकमा पनि त्रिविमा कार्यरत नै रहनुपर्नेछ । सुविधा लिँदा निर्देशनालयले तोकको प्रक्रिया पूरा गरी तोकिएकै अस्पतालबाट सेवा लिन सकिन्छ ।
किन पाएनन् विद्यार्थीले सुविधा ?
त्रिचन्द्र क्याम्पसका विद्यार्थीले स्वास्थ्य बिमा सुविधा लिन पाएनन् । विद्यार्थी संगठनको विरोधका कारण बिमा शुल्क लिन नपाएको क्याम्पस सहायक प्रमुख डा. सन्तबहादुर थापा बताउँछन् ।
विद्यार्थी संगठनले बिमा सुविधाको शुल्कलाई शुल्क बढाउने बहाना भन्दै विरोध गरेपछि क्याम्पसले बिमा सुविधा शुल्क लिएन । तर, विद्यार्थीले बिमा सुविधा लिन नपाएको गुनासो गरेका छन् ।
निर्देशक मगरका अनुसार क्याम्पसको बेवास्ताका कारण विद्यार्थी सुविधाबाट वञ्चित छन् । भर्नामा बिमा शुल्क नलिँदा विद्यार्थी स्वास्थ्य सुविधाबाट वञ्चित भएको भन्दै निर्देशक मगर भन्छन्, ‘निर्देशनालयले विद्यार्थी संख्याअनुसार क्याम्पसको बजेटबाटै शुल्क मिलान गर्ने भनी दबाब दिएका छौं तर पनि केही क्याम्पसले अझै अटेरी गरिरहेका छन् ।’
त्यस्तै, त्रिविले फरक क्षमता भएका विद्यार्थीका लागि बिमा शुल्क नलिने व्यवस्था गरेको छ । त्रिविले उनीहरूको सहजता र प्रोत्साहन गर्न बिमा शुल्क नलिने निर्णय गरेको हो । तर, केही क्याम्पसले त्यस्ता विद्यार्थीसँग शुल्क लिने गरेको गुनासो आएको गुरुङले बताइन् ।
त्रिविले विद्यार्थीको सहुलियतका लागि भन्दै विभिन्न शीर्षकमा उपचार खर्च बेहोर्ने निर्णय गरेको छ । तर, जुनसुकै रोगका लागि भने खर्च गर्नेछैन । गुरुङका अनुसार निम्न अवस्थामा उपचार खर्च पाइनेछैन :
१. शिक्षक र कर्मचारीले बेहोर्नुपर्ने तोकिएको न्यूनतम उपचार खर्च,
२. कानमा लगाउने सुन्ने उपकरण खर्च,
३. चस्मा र चस्माका लेन्स खर्च,
४. कुनै किसिमका स्वैच्छिक कस्मेटिक उपचार खर्च,
५. कुनै युद्ध, जनआन्दोलन वा झैझगडामा परी घाइते भएको उपचार खर्च,
६. दुर्घटनामा परी उपचार गर्नुपरेका दाँतको उपचारबाहेक अन्य अवस्थामा गरिने दाँतको उपचार खर्च,
७. सम्बन्धित क्याम्पसमा भर्ना हुनुअगाडि लागेको दीर्घकालीन रोग भएको मेडिकल बोर्डबाट ठहर हुन आएमा त्यस्ता विद्यार्थी कोषको सदस्य भए पनि सम्बन्धित रोगको स्वास्थ्योपचार खर्च,
८. कुनै प्रकारको पनि औषधि खर्च,
९. नेपाल सरकारको नीति र कार्यक्रमअनुसार निःशुल्क उपचार गर्ने भनिएका स्वास्थ्योपचार खर्चका साथै नेपाल सरकारद्वारा लागू भएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध बिमित व्यक्तिका लागि गरिने खर्च,
१०. सुत्केरी र गर्भवतीसम्बन्धी कुनै पनि खर्च,
११. सामान्य चेकअपमा लाग्ने खर्च ।
विद्यार्थीले आफ्नो अधिकारबारे जान्न नखोज्नु र क्याम्पसले उनीहरूलाई जानकारी नदिनु आआफ्नै कमजोरी भएको गुरुङ बताउँछिन् ।
स्वास्थ्य उपचारका लागि त्रिविले अस्पताल तोकेर शिक्षक, कर्मचारी र विद्यार्थीलाई ती अस्पतालबाटै सेवा लिन आग्रह गरेको छ ।
राजधानीमा अध्ययनरत विद्यार्थी, शिक्षक, र कर्मचारीले त्रिभुवन विश्ववद्यालय शिक्षण अस्पतालबाट यो सुविधा लिन सक्नेछन् भने अन्य जिल्लामा अध्ययनरत विद्यार्थी, शिक्षक र कर्मचारीले निम्न अस्पतालबाट सुविधा लिन सक्नेछन् :
तोकिएको अस्पतालभन्दा बाहिर उपचार गराएमा विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयले खर्च बहोर्ने छैन ।
प्रकाशित मितिः बिहिबार, बैशाख १९, २०७६ 7:18:40 PM
Prevयी हुन् बोक्रासहित स्याउ खानुका फाइदा
Nextकेपिएल उपाधीका लागि अार्मी र न्यू हाेराइजन बुटवल भिड्ने